वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. देवकोटाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि
कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको भेला मकवानपुरको हेटौंडामा
प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान, विभिन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने
अफ्गानिस्तानको काबुलस्थित सरकारी कार्यालयमा आत्मघाती बम आक्रमण हुँदा कम्तिमा १२ जनाको मृत्यु
सुन तस्करीमा संलग्न गोरेसहित ३ जना सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागमा
विश्वकप सभ्य तरिकाले मात्रै हेर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनकाे ११ बुँदे उर्दी
अत्याधिक गर्मीका कारण सुनसरीमा विरामीको संख्या बढयो
बेलायत सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने गेसोको चेतावनी
एपीएफ क्लबलाई प्रधानमन्त्री कप एक दिवशीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि
जनमत विपरित चले दुई नम्बरमा पनि नेकपाकै सरकार : दाहाल
गृह पृष्‍ठ / एभिन्यूज @ बिजनेस
मौद्रिक नीतिलाई शेयर बजारले स्वागत गर्न सकेन
26 Ashad 2074 Monday 3:30 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं । शेयर बजारले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्न सकेन । आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुदै गर्दा निकै उतारचढाव भएको बजार बन्द हुदाको समयमा सामान्य अंकले बढेको थियो भने कारोबार रकममा भारी बृद्धि भएको थियो । तर सोमबार बजारले सकारात्मक रुपमा लिएको छैन् ।
जसले गर्दा बजार परिसुचक नेप्से झण्डै ९ अंकले घटेको छ । क वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि झण्डै सवा दुई अंकले घटेको छ । कारोबार रकममा पनि आइतबार भन्दा झण्डै आधारकमको मात्र कारोबार भएको छ । नेप्से परिसुचक १ हजार ५ सय ७५ दशमलव दुई दुई अंकमा बन्द भएको छ ।
एक सय ५० कम्पनीहरुको ६९ कारोड भन्दा माथिको कारोबार भएको छ । त्यस्तै २८ लाख ६५ हजार ९२ कित्ता शेयर खरिद विक्री भएको छ । बजार खुले देखि झण्डै साढे एक घण्टा सम्म घटेको बजार एक बजे पछि भने केहि सुधार भएको थियो । तर अन्तमा फेरि गिरावट आउदा बजार नकारात्मक भएर बन्द भएको छ ।
बजारमा उत्पादन तथा प्रसोधन समुह बाहेक सबै समुहका परिसुचकहरुमा गिरावट आएको छ । सबैभन्दा बढि विमा समुहमा गिरावट आएको छ । बैंकिङ समुहमा पनि राम्रै गिरावट आएको छ । विमा र बैंकिङ समुहमा आएको गिरावटका कारण समग्र परिसुचक नेप्सेमा पनि गिरावट आएको छ ।
सोल्टी होटलको शेयर कारोबार सबैभन्दा बढि रकमको भएको छ । वल्र्ड मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका शेयर धनिहरुले सबै भन्दा बढि कमाएका छन् । त्यस्तै प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका शेयरधनिले सबैभन्दा बढि गुमाएका छन् ।
एभिन्यूज @ बिजनेस
सुन तस्करीमा संलग्न चुडामणि उप्रेति ‘गोरे’, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का नेता भुजुङ गुरुङ र उनको सालो छिरिङ वाङगेललाई काठमाडौं ...
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका २ डेरीका ४ गोदाममा शिलबन्दी
धादिङका किसान विषादी रहित तरकारी उत्पादनमा
किम-ट्रम्प शिखरवार्ताका लागि १ करोड ५० लाख डलर खर्च
राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति बनाउने
३१ लाख ८ हजार अबैध भारतीय रुपैयाँ सहित बीरगञ्जवाट दुई जना पक्राउ
संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने राजपाको निर्णय
5 Ashad 2075 Tuesday 6:39 pm
5 Ashad 2075 Tuesday 6:32 pm
5 Ashad 2075 Tuesday 3:00 pm
5 Ashad 2075 Tuesday 2:58 pm
डा. देवकोटाप्रति न्यूरो अस्पतालमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली
5 Ashad 2075 Tuesday 2:54 pm